I-Endesa iya kunciphisa isahlulo sayo ukusuka ngo-2021 | Ezezimali
Abatyalomali ababekwe kwindawo yentengiso yesitokhwe baya kufumana imvakalelo engathandekiyo ngeendaba zokuba inkampani yombane i-Endesa izakunciphisa izabelo zayo ukusukela ngo-2021. Le yinto ekucingwa ngayo Isicwangciso seStratéi-gico yexesha elisusela ku-2019 ukuya ku-2021. Ngenjongo yokuqinisa umgaqo-nkqubo wokukhula kunye nokusebenzisa amathuba avulwe ngumjikelo omtsha wokutshintsha kwamandla. Oku kubonisa utshintsho olubalulekileyo malunga nomgaqo-nkqubo obekhokelela ukuza kuthi ga ngoku.
Ngamazwi omnye wabalawuli bayo, imalunga nokuthatha ithuba lokukhula kwenkampani ephethwe yi-Italiyane Enel, kwaye ithatha inxaxheba kwi-100% ekusebenzeni endikwenzileyo kwiminyaka eliqela eyadlulayo. Ngale ndlela, inkampani yaseCatalan ayisayi kwabela i-100% yenzuzo kwisahlulo esisetyenzisiweyo kule minyaka mithathu idlulileyo. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, iya kuncitshiswa iye kwi-80% yazo, nangona kukho inkcaza encinci yokuba abatyali mali abancinci nabaphakathi kufuneka baxabise ukusukela ngoku. Njengokuba inyani yokuba inzuzo izonyuka ngeli xesha.
Kwelinye icala, kule ndlela intsha, umphathi we-Endesa ucacisile ukuba “okokuqala, kufuneka sijongane nomjikelo omtsha wokutshintsha kwamandla; okwesibini, ukufakwa kwikhompyutha kuza kuzisa amathuba amaninzi okunciphisa iindleko kodwa kuya kufuna isixa esikhulu sotyalo-mali; Okwesithathu, ukuphucula ubudlelwane bethu nabathengi kuya kufuna notyalo-mali olutsha ”. Ukuze uchaze kubatyali mali ezakuba zezona Umjikelo omtsha wenkampani yombane kuluhlu lwe-Ibex 35.
1 Endesa: Ukwabelana ngenzuzo
2 Uqikelelo kude kube ngo-2021
3 Ixhaswa ziiarhente zezemali
4 Kumanqanaba ee-euro ezingama-20 ngesabelo ngasinye
5 Umda onokubakho
6 Ingeniso esisigxina minyaka le
Endesa: Ukwabelana ngenzuzo
Kusekho iminyaka emibini de tshintsha le nkqubo yemivuzo kumnini zabelo. Kuba ngokusebenza kwayo, yonke inzuzo yayo iyakusasazwa kule minyaka mibini izayo kwaye kwelinye icala kuqikelelwa ukuba kuya kwenziwa okufanayo nge-5.900 yezigidi zeerandi kule minyaka mine izayo. Esinye sezizathu zolu tshintsho lubalulekileyo kwisahlulelo abaza kusifumana abaninizabelo kukuba kwezi zigidi ezingama-6.400 ezilindele ukuba ibe yimali eqikelelweyo ye-Endesa, malunga ne-2.000 yezigidi zeerandi ziya kwabelwa ukuvuselelwa, icandelo kulowo unqwenela zibeka njengenye yeenkampani zombane ekubhekiswa kuzo kwinqanaba lesizwe.
Ngelixa ngokuchaseneyo, kuyamangalisa kakhulu inyani yokuba inxenye yezibonelelo eziqikelelweyo ziya kuya zintsha utyalo mali kwizinto ezinokuhlaziywa kwaye zibonakalisiwe ekudalweni kwecandelo elitsha lokuhamba kombane elibizwa ngokuba yi-Endesa X. Ngokuchanekileyo le nxalenye yesivumelwano ikhuthaza eli Sebe ukuba liphuhlise kwelinye icala kwaye linokuthi nangomzuzu othile lifakwe kuluhlu lweNtengiso yeStock. ngokuzimeleyo, njengoko kuye kwenzeka nakwezinye iinkampani ezidweliswe kwiimarike zezabelo.
Uqikelelo kude kube ngo-2021
Enye into efanelekileyo yokuqaqambisa kukuba uqikelelo lwenye yeenkampani ezikhokelayo kwi-Ibex 35 ziya kusondela kakhulu kwi-6.300 yezigidi zeerandi kwixesha le-2018-2021. Ukuba sesinye sezizathu eziphambili zolu tshintsho olwenziwe ukuba iyatshintsha inkqubo yemivuzo phakathi kwabanini zabelo. Ngayiphi na imeko, kuye kwabothusa kakhulu uninzi lweearhente zezemali ezilindele ukuqhubeka kolu hlobo lomvuzo kwiimarike zezabelo. Ngale ndlela, unokwenza idosi elungileyo yokungazinzi kwixabiso lezabelo zakho.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ezi datha zibonelelwa yi-Endesa zimele Iipesenti ezisi-7 zikhula ngonyaka, ethi ekugqibeleni imele ipesenti enye yenani elingaphezulu kwelo liqikelelweyo kwisicwangciso esiliqili sangaphambili senkampani yamandla esisiseko. Kwelinye icala, asinakulibala ukuba olu luhlu lweemarike zaseSpain lubaluleke kakhulu kumgaqo wesiko lweshishini. Ngengqondo yokuba izakugxila ngakumbi kumandla ahlaziyekayo njengomthombo wezibonelelo ezinokuzifumana kule minyaka imbalwa izayo.
Ixhaswa ziiarhente zezemali
Isigqibo senkampani yombane sokunciphisa ixabiso lesabelo kwi-80% yenzuzo eyenziweyo ifumene ukuvunywa kwamanye amaziko emali abaluleke kakhulu. Ngale ndlela, ukusukela Bankinter Qikelela ukuba “Ukuqinisekiswa kwezikhokelo ze-BNA yowama-2020 kunye nezahlulo ziindaba ezimnandi kwisitokhwe. Ukuncitshiswa okulandelayo kwimbuyekezo elawulwayo kunikezelo kunye nokubanokwenzeka kokusebenza kwequmrhu kuya kugxila kutyalo-mali lwabanini-mali ekunikezelweni kwesiCwangciso ”. Ngayiphi na imeko, ukuba nethemba kakhulu ngesikhundla kwinkampani yebenmarkmark.
Ngokuchaseneyo, umphathi wengxowa-mali u-JP Morgan ubeka uthotho lwezithunzi ngale ndlela, elumkisa ngelithi “siyaqonda, kwaye besilindele, umyalezo othi, ekuhambeni kwexesha, ukuhlawulwa kwesahlulo kufanele kube ngaphantsi kwe-100% yenzuzo , kodwa sikholelwa ekubeni umyalezo ubunokwakheka ngokwembono ebambekayo ethintele uluvo lokuba isahlulo ngesabelo ngasinye siza kuncitshiswa malunga ne-10% ngo-2021 kwaye kungabonakali apho.
Kumanqanaba ee-euro ezingama-20 ngesabelo ngasinye
Nokuba yeyiphi na, inye into icacile kwaye kukuba amaxabiso ezabelo ahamba kuluhlu olusuka kwi-17 kunye ukuya kuthi ga kwi-21 euro. Ukuba eli nqanaba lokugqibela lidlulile, liyakucwiliswa kwelona nani lihle kakhulu kubatyali mali abancinci nabaphakathi, elingenakuba lelinye ngaphandle konyuko olubizwa ngokuba simahla. Oko kukuthi, akusayi kubakho mqobo wokufikelela kwiindawo eziphakamileyo kwixabiso. Ngaphandle kokusikwa kwangexesha okunokuvela kweli khefu licacileyo liye phezulu. Apho inokubanamandla aphezulu kakhulu anokukhokelela kumaxabiso anokubangela umdla kakhulu kubantu abazibeke ngokwabo kweli xabiso lesalathiso sezabelo zaseSpain.
Inani lokunyuka kwamahhala yenye yeenjongo eziphambili ze-Endesa kwaye xa isahlulo sithe saphungulwa kuqikelelo lwamaxabiso aso. Kungenxa yokuba oko kuya kuthetha ukuqinisekiswa kwe- a indlela yokucacisa ngokucacileyo kwaye ngokwemiqathango yonke: imfutshane, iphakathi kwaye inde. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga esisiseko. Ngayiphi na imeko, i-Endesa yenye yexabiso ekufuneka lithathelwe ingqalelo kulo nyaka sisandula ukuwuqala, ngaphandle kwenyani yokuba intshukumo yayo ayisiyeyona iphambili kwimarike yaseSpain.
Nangona kunjalo, abalamli bezezimali okwangoku abayiniki amandla okuhlaziya ngokutsha, malunga neepesenti ezintlanu. Nangona kuyinyani ukuba kuya kufuneka baphonononge iindaba zamva nje ezivelisiweyo ezivela kule nkampani. Ngokukodwa, utshintsho kutheko malunga nokuhlawulwa kwezahlulelo. Konke oku kwimeko yecandelo lombane iphucule kakhulu kwiinyanga ezidlulileyo kwaye ezichaphazela iinkampani ezidweliswe kwisalathiso esikhethiweyo semarike yaseSpain, enje ngeIberdrola, iEnagás, iRed Eléctrica Española okanye eyayisakuba yiGesi yeNdalo.
Kwelinye icala, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba i-Endesa imele elinye lamaxabiso azinzileyo kwizabelo zeSpain. Kakhulu ukungazinzi okuncinci kwaye yintoni ebaluleke ngakumbi kuninzi lwabatyali mali abazikhuselayo kwimarike, ngokwahluka okumbalwa phakathi kwamaxabiso abo aphezulu kunye neyona isezantsi kwiseshoni efanayo yorhwebo. Njengomphumo wezi mpawu zikhethekileyo, olu khuseleko lunokuba lelinye lamaxabiso aphezulu kwimarike yemasheya ukukhusela imali yethu ngamaxesha okungazinzi okukhulu kwiimarike zezemali. Ngokusebenza okungcono kunezinye iinkampani ezidwelisiweyo.
Okokugqibela, ayifanele ilibale ukuba ngaphandle kwayo yonke le micimbi, le nkampani iya kuqhubeka nokusasaza izabelo phakathi kwabo bonke abaninizabelo. Ukuze ngale ndlela, benze iphothifoliyo yengeniso esisigxina ngaphakathi kokungafaniyo, kunye nengeniso esisigxina kunye neqinisekisiweyo minyaka le. Nokuba kwenzeka ntoni kwiimarike zezabelo.
Apho kufanelekile ukuba uqaphele ukuba "Iinjongo zeli xesha zibandakanya iminyaka 2009 kunye ne2020 zisekwe kwingcinga ezinesidima ezinokuthi zityhale uqikelelo lweBloomberg ngamanani asezantsi okanye aphakathi, ”njengoko bechaza abahlalutyi bezemali beJP Morgan.
Ayothusi into yokuba bakwagxininisa into engeyiyo kwinkampani, njengokuba imeko yesahlulo ithumela umyalezo ombi kubatyali mali. Ngengqondo yokuba yenza umyalezo odidayo kakhulu malunga nokuza kwenzeka kunye nokuqokelelwa kwezahlulelo ezivela kwixesha elichazwe yile nkampani yombane. Ngolungiso olunokubakho kumaxabiso alo ngenxa yokuthandabuza athe wakwenza phakathi kwabatyali mali. Njengomphumo wezi mpawu zikhethekileyo, olu khuseleko lunokuba lelinye lamaxabiso aphezulu kwimarike yemasheya ukukhusela imali yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » I-Endesa iya kunciphisa isahlulo sayo ukusuka ngo-2021